Christopher Walker dia mampiseho ny herin'ny natiora amin'ny "Fanekena" | Famoronana an-tserasera
"Fanekena", acrylic nataon'i Christopher Walker
Mialoha ny iray hafa isika mpanao hosodoko photorealistic fa raha tsy nolazain'izy ireo taminay fa sary hoso-doko izany, dia azo antoka fa hanomboka hanaiky ny loza mety hitranga isika amin'ny alàlan'ny kayak iray voahodidin'ny trozona mpamono olona marobe ao anaty rano izay toa ilay mpitolona ilay "sary" irery no teo imason'ny Loza.
Christopher Walker no mpanao hosodoko meloka amin'ity sangan'asa mahafinaritra ity izay adika matetika ny halehiben'ny herin'ny natiora amin'ny fotony rehetra, ny fametrahana ny olona miakanjo sambo tsotra na kayak amin'ity tranga ity, anjarantsika izao.
Sary hosodoko miaraka amin'i akrilika avo lenta izay mampiseho ny iray amin'ireo tombana mialoha an'i Walker ary tsy iza fa i Kanada. Izy io dia ao amin'ny repertoire-ny sary hosodoko izay ahitantsika ny axis afovoan'ity firenena ity izay ampisehoan'ny ankamaroan'ny faritra faritany azy ny lafiny ratsy indrindra.
Ny fombany dia avy amin'ny mpanakanto hafa toa an'i Alex Colville ary mametraka antsika eo alohan'ny sary hosodoko izay maneho tsara ny tontolo iainana tsy mendrika an'izany toerana izany mampihetsi-po tokoa ary tena mipoaka tokoa amin'ny tanjaky ny tany. Ny ranomasina ho toy ny iray amin'ny iraisan'ny besinimaro iraisana sy ny fahaleovan-tena manetriketrika ny sasany amin'ireo mahery fo amin'ny ankamaroan'ny sangan'asany.
Raha mamaky ny asanao hafa izahay, manirery dia zavatra azo tsapain-tanana fa avy amin'ireo olona manana soatoavina matanjaka, fanapahan-kevitra lehibe ary iza no manokana fotoana hamakiana ho loharano hanohizana miaina isan'andro isan'andro na aiza na aiza.
Ao amin'ny «Fanekena» no ahitantsika ny trozona mpamono ho toy ny singa mampidi-doza mba hanehoana ny fiorenan'ny olona milomano miaraka amin'ny finiavana. Trozona mpamono izay voaporofo fa tsy manafika olombelona, ​​na dia fantatsika rehetra aza fa mampidi-doza izy ireo ary tokony hanaja azy ireo amin'izany. Asa izay mampiseho ny herin'ny natiora amin'ny fitambarany.
Etsy andaniny, Fanomezana acrylic an'i Haffner.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » "Fanekena", acrylic nataon'i Christopher Walker
Surrealism amin'ny sary Flora Borsi
Ny kanton'ny habaka ratsy sy tsara amin'ny sary noforonin'i John Randall